Ruushka & Shiinaha oo la caroodey in cunaqabataynta hubka laga qaado Somalia iyo Maraykanka oo qiray sababta Somalia loogu hayo. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Ruushka & Shiinaha oo la caroodey in cunaqabataynta hubka laga qaado Somalia...
Ruushka & Shiinaha oo la caroodey in cunaqabataynta hubka laga qaado Somalia iyo Maraykanka oo qiray sababta Somalia loogu hayo.
Walwaal Online;(New York) 13 Nof 2020 – Golaha Amaanka ayaa kulan ay shalay ka yeesheen arrimaha Somalia, waxay soo jeediyeen in caalamku uu xakameeyo fursadaha ay kooxda Shabaabku helaan walxaha qarxa, hubka iyo rasaasta iyagoo DF Somalia faray in ay wax ka qabato maaliyadda ay kooxdani ka hesho gudaha Somalia oo $21 milyan oo doollar lagu qiyaasay sanadkii tegey.
Previous articleMidowga Yurub oo joojinaya lacagihii kaalmada ahaa ee dibedaha uga iman jirey masaajidda & macaahidda Muslimiinta.
Next articleGobolka Sool, Saddex qof oo isku Qoys ah oo ku dhintay Qarax miino.